Uvimba woLingo-Ilungelo laseMelika lokwazi
Intetho entsha malunga nokuhlala phakathi kweBayer kunye nezigulana ezinomhlaza weRoundup
ezaposwa ngomhla Ngamana 26, 2020 by UCarey Gillam
Kwakukho intetho ehlaziyiweyo malunga nokulungiswa okunokubakho kule veki phakathi kweBayer AG kunye namashumi amawaka ezigulana ezinomhlaza njengeyona nkundla iphambili yokumamela kwinkundla kwiveki ezayo.
Ngokutsho ingxelo eBloomberg, Amagqwetha aseBayer afikelele kwizivumelwano zomlomo namagqwetha ase-US amele abammangali abayi-50,000 XNUMX abamangalela uMonsanto ngenxa yamabango athi i-Roundup kunye nezinye i-Monsanto herbicides zibangele ukuba abamangali baphuhlise i-non-Hodgkin lymphoma.
Iinkcukacha njengoko zixeliwe yiBloomberg zibonakala ngathi azitshintshanga kwizivumelwano zomlomo zangaphambili phakathi kweBayer kunye negqwetha labamangali elahlayo ngexesha lokuvalwa kwenkundla enxulumene neCoronavirus. Ngeenkundla zivaliwe, iintsuku zetyala ziye zahlehliswa, kususwa uxinzelelo eBayer.
Kodwa indawo yoxinzelelo entsha iyavela kwindlebe yeveki ezayo kwisibheno solingo lokuqala lomhlaza we-Roundup. Inkundla yezibheno yaseCalifornia ISithili sokuBhena sokuqala imiselwe ukumamela iingxoxo zomlomo kwizibheno ezinqamlezileyo kwimeko kaJohnson v Monsanto ngoJuni 2.
Elo tyala, elalixabanise umgcini-ndawo waseCalifornia uDewayne “Lee” Johnson ngokuchasene neMonsanto, kukhokelele kwi- $ 289 yezigidi zomonakalo kaJohnson ngo-Agasti ka-2018. I-jury ayifumananga kuphela ukuba i-Roundup kaMonsanto kunye nemveliso ezinxulumene ne-glyphosate ibonise ingozi enkulu kubantu abayisebenzisayo, kodwa ukuba "kukho ubungqina obucacileyo nobukholisayo" bokuba amagosa kaMonsanto asebenze "ngobubi okanye ingcinezelo" ukusilela ukulumkisa ngokufanelekileyo ngomngcipheko.
Ijaji yetyala kwityala likaJohnson kamva wehlisa umonakalo ukuya kwizigidi ezingama-78.5 zeedola. UMonsanto ubhenele nakwibhaso elincitshisiweyo, kwaye uJohnson wenza isibheno efuna ukubuyiselwa kwibhaso elipheleleyo lejaji.
In Ukubhengeza isigwebo, UMonsanto wacela inkundla ukuba isijike isigqibo sokulingwa kwaye ingene kwisigwebo seMonsanto okanye iguqule kwaye ibuyisele ityala kwityala elitsha. Okona kuncinci, iMonsanto yacela inkundla yezibheno ukuba inciphise isahlulo sebhaso lejaji "ngomonakalo ongekhoyo kwixesha elizayo" ukusuka kwi-33 yezigidi zeedola ukuya kwi-1.5 yezigidi zeedola kunye nokucima umonakalo owohlwayo ngokupheleleyo.
Abagwebi benkundla yezibheno ndinike uluvo kwangoko malunga nendlela ababoyame ngayo etyaleni, besazisa amagqwetha amacala omabini ukuba kufanelekile ukuba balungele ukuxoxa ngombuzo womonakalo kwityala le-2 kaJuni. Amagqwetha abamangali athabathe oko njengophawu olukhuthazayo lokuba iijaji zisenokungacwangcisi ukuyalela ityala elitsha.
Ngaphantsi kwemigqaliselo yentlawulo ekuxoxwe ngayo kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, iBayer iya kuhlawula i-10 yezigidigidi zeedola ukuzisa ukuvalwa kwamatyala agcinwe ziifemu ezinkulu ezininzi, kodwa ayizukuvuma ukubeka iilebhile zokulumkisa ngokhula olusekwe kwiglphosate. ababulali, njengoko bekufunwa ngamanye amagqwetha abamangali.
Ukuhlawulwa akuyi kugubungela bonke abamangali ngamabango alindileyo. Ayizukugubungela uJohnson okanye abanye abamangali abathathu abasele bephumelele amabango abo enkundleni. IMonsanto kunye neBayer babhenele kuko konke ukulahleka kwetyala.
Amagqwetha kumafemu amakhulu abandakanyeka kwisimangalo ale ukuxoxa ngemeko yangoku.
Amagosa aseBayer akhanyela ukuba bukhona ubungqina benzululwazi obudibanisa i-glyphosate herbicides kunye nomhlaza, kodwa abatyali mali bafuna ukusombulula isisombululo. Iya kuba luncedo iBayer ukuwasombulula amatyala phambi kwaso nasiphi na isigqibo esichasene nenkundla yesibheno, esinokuthi siqhubekeke siphazamise abanini zabelo benkampani. I-Bayer ithenge iMonsanto ngoJuni ka-2018. Ukulandela ukulahleka kwetyala likaJohnson ngo-Agasti ka-2018, ixabiso lesabelo lenkampani lehlile kwaye lihleli liphantsi koxinzelelo.
Amacala okuqala kumatyala omhlaza we-Roundup afayiliswa ngasekupheleni kuka-2015, oko kuthetha ukuba uninzi lwabamangali belinde iminyaka yokusonjululwa. Abanye babamangali babhubhile ngelixa belindile, amatyala abo ngoku esiwa phambili ngamalungu osapho ekhathazekile kukungabikho kwenkqubela phambili ekuziseni amatyala.
Abanye babamangali bebesenza imiyalezo yevidiyo ejolise kubaphathi beBayer, befuna ukuba bavumelane ngokuhlala kunye nokwenza utshintsho lokulumkisa abathengi malunga nemingcipheko yomhlaza ezinokubangelwa yimichiza yokubulala ukhula eglyphosate enje ngeRoundup.
UVincent Tricomi, oneminyaka engama-68, ngummangali onjalo. Kwividiyo ayenzileyo, awabelana ngayo ne-US Right to Know, uthe uye wajongana nemijikelo eli-12 yechemotherapy kunye nokuhlala esibhedlele ezintlanu elwa nomhlaza wakhe. Emva kokufumana ukuxolelwa okwethutyana, umhlaza uphinde wabuya ekuqaleni kwalo nyaka, utshilo.
UTricomi uthi: “Baninzi kakhulu njengam abasokolayo nabadinga ukukhululeka. Jonga umyalezo wakhe wevidiyo apha ngezantsi:
I-Monsanto Roundup Trial Tracker ulimo, Bayer, Bayer AG, inkundla, indawo, EPA, zolimo, FDA, ukutya, glyphosate, impilo, herbicides, IMonsanto, inambuzane, Yisonge yonke, inzululwazi, trial, ukubulala ukhula
Uvavanyo lomhlaza waseSt
ezaposwa ngomhla January 31, 2020 by UCarey Gillam
Idrama iyaqhubeka kwidabi elibukhali elibukele phakathi kwamagqwetha akhusela i-Monsanto Co yangaphambili kunye nabo bamele amawaka amaxhoba omhlaza abathi babhencwe kwi-Roundup herbicide kaMonsanto abanike yona okanye ilungu losapho elingelilo iHodgkin lymphoma.
NgoLwesihlanu, ityala laseCalifornia lahlehliswa ngokusesikweni emva kweveki ngaphezulu kwemisebenzi yokukhetha ijaji kunye nokuhlala kwabagwebi abali-16. Endaweni yokuqhubeka neengxelo zokuvula, eli tyala ngoku limiselwe elinye ixesha ngokungenammiselo, kunye nenkomfa yolawulo lwamatyala ebekelwe uMatshi 31.
Okwangoku, ityala labamangali abaninzi elamiswa ngaphambi nje kokuba kuvulwe iingxelo kwiveki ephelileyo eSt.Louis limiselwe ukuba livulwe ngoLwesithathu olandelayo, imithombo ekufutshane nesimangalo ithe.
Ulingo lwaseSt. Inethiwekhi yokujonga iNkundla nangokusondeza kwizikhululo zikamabonakude nakunomathotholo. Amagqwetha omnini waseMonsanto waseJamani uBayer AG baphikisana nokusasaza ityala, besithi ukupapashwa kubeka engozini abaphathi kunye namangqina.
Izilingo ezininzi zikhutshiwe kwidokethi kwezi veki zidlulileyo njengoko iBayer, eyathenga iMonsanto kwi2018, isondele kufutshane nokuhlaliswa kwehlabathi malunga noko kungaphezulu kwamabango angama-50,000 100,000 - olunye uqikelelo lungaphezulu kwe-10. I-Bayer ijonge ukuhlawula phantse i-XNUMX yezigidigidi zeedola ukuhlawula amabango, ngokwemithombo esondeleyo kuthethathethwano.
Amacala onke atyhola ukuba iMonsanto yayilwazi kakuhle uphando lwenzululwazi olubonisa ukuba kukho umngcipheko kwimpilo yabantu ebotshelelwe kwimichiza yokubulala ukhula eglyphosate kodwa ayenzanga nto ukulumkisa abathengi, endaweni yoko basebenzise irekhodi lenzululwazi ukukhusela ukuthengisa kwenkampani.
Abatyalomali be-Bayer banomdla kwinkampani ukuba iphelise isimangalo kwaye ishiye izilingo ezininzi kunye noluntu oluziswa ngumntu ngamnye. Amagqwetha ka-Bayer axele ukuba axoxisene ngentlawulo yokuhlawulwa kwabaxhamli beenkampani ezininzi ezinkulu, kodwa abakwazanga ukufikelela kwisivumelwano neenkampani ezimbini zabamangali-iMiller Firm yaseVirginia kunye neWeitz & Luxenberg yaseNew York. Ifemi yeMiller imele abamangali kumacala amabini aseCalifornia asandula ukukhutshwa kwidokethi kwaye kwityala laseSt.
Izabelo ziphakame kwiveki ephelileyo xa ityala laseSt. Louis lahlehliswa ngesiquphe njengamagqwetha akhokelayo avela kumashishini amabini abamangali - uMike Miller noPerry Weitz - bayishiya inkundla ngaphambi nje kokuba kuvulwe iingxelo zokuvula ukuze kuqhubeke intetho zomzuzu wokugqibela kunye neBayer amagqwetha.
Ukumiswa kwetyala kuye kwabakhathaza ababukeleyo, kubandakanya neqela elivela kwiNkundla yokujonga iNkundla, elihlala enkundleni yamatyala kule veki lilindele iindaba zokuba lingaqhubeka nini ityala. Baxelelwe kusasa ngolwesiHlanu kuphela ukuba ityala alizukuqhubeka ngoMvulo. Bafunde kamva ukuba izakuqhubeka kwakhona ngolwesiThathu endaweni yoko.
Ezo zilingo zajika zanikwa iliso ngabantu Iirekhodi zangaphakathi zeMonsanto ezibonisa indlela iMonsanto eyenze ngayo amaphepha enzululwazi evakalisa ukhuseleko lweeherbicides zayo ezibonakala ngathi zenziwe kuphela ngoososayensi abazimeleyo; basebenzise abantu besithathu ukuzama ukujongela phantsi izazinzulu ezixela ukwenzakaliswa kwe-glyphosate herbicides; kwaye sasebenzisana namagosa e-Arhente yoKhuselo lokusiNgqongileyo ukukhusela imeko kaMonsanto yokuba iimveliso zayo azibanga ngumhlaza.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, EPA, ukutya, glyphosate, IMonsanto, Yisonge yonke, inzululwazi, trial
Ukuhlaliswa kweBayer yamabango omhlaza weRoundup asephezulu emoyeni
ezaposwa ngomhla January 28, 2020 by UCarey Gillam
Amajaji akhethwe ukuba aphulaphule ityala laseSt. Ukumangalelwa malunga nokukhuseleka kwemichiza yokubulala ukhula i-Roundup kusaqhubeka.
Kwesinye isibonakaliso sokuba isivumelwano asikakhuselwa, ukhetho lwejaji kwiilingo ezahlukeneyo zomhlaza we-Roundup- le yaseCalifornia-yayiqhubeka kule veki. Izilingo eSt. Louis naseCalifornia zibandakanya abamangali abathi bona okanye abo babathandayo baphuhlise i-non-Hodgkin lymphoma ngenxa yokuvezwa kwe-glyphosate-based herbicides eyenziwe nguMonsanto, kubandakanya neRoundup brand. Amashumi amawaka abamangali benza amabango afanayo kwizimangalo ezifakwe kwi-United States.
I-Bayer ithenge iMonsanto ngoJuni ka-2018 kanye njengoko ityala lokuqala kwityala lobundlobongela beliqhubeka. Ixabiso lesabelo sikaBayer lacothwa emva kokuba ijaji evumayo ifumanise ukuba ukubulala izitshabalalisi zeMonsanto kwakungunobangela womhlaza wommangali kuloo meko nokuba iMonsanto yayifihle ubungqina bomngcipheko womhlaza kuluntu.
Izilingo ezimbini ezongezelelekileyo zikhokelela kwiziphumo ezifanayo zejury kwaye zatsala ingqalelo yamajelo eendaba kwilizwe lonke ukuba kugxothwe amaxwebhu eMonsanto angaphakathi abonisa ukuba inkampani ibandakanyeka kwizenzo zenkohliso kumashumi eminyaka ukukhusela nokukhusela inzuzo yemichiza yokutshabalalisa ukhula.
Abatyalomali be-Bayer banomdla kwinkampani ukuba iphelise isimangalo kwaye ishiye izilingo ezininzi kunye noluntu oluziswa ngumntu ngamnye. Izabelo ziphakame kwiveki ephelileyo xa ityala laseSt. Louis lahlehliswa ngesiquphe njengamagqwetha abamangali ababexinene namagqwetha aseBayer kwaye abonisa ukuba umhlaba wonke wokumangalelwa wawusondele.
Amanani ezi-8 zeebhiliyoni- $ 10 yezigidigidi ahanjisiwe iiveki ngemithombo yolwaphulo-mthetho njengendawo yokuhlawula amatyala ngobuninzi bamatyala athe abamba iBayer okoko ithenge iMonsanto nge $ 63 yezigidigidi.
I-Bayer sele ithethathethane ngemiqathango yokuhlawula kunye neenkampani ezininzi zomthetho ezikhokela isimangalo, kodwa khange ikwazi ukufikelela kwisivumelwano neenkampani zabamangali ze-Weitz & Luxenberg kunye neMiller Firm. Ngokudibeneyo ezi femu zimbini zimele abamangali abasondeleyo abangama-20,000 XNUMX, besenza ukuba bathathe inxaxheba kwisivumelwano njengeyona nto ibalulekileyo kwisivumelwano esiya kuthi sixolise abatyali-mali, itsho imithombo ekufutshane nesimangalo.
Imithombo ithi la macala mabini "asondele kakhulu" kwisivumelwano.
Ngokwahlukeneyo, kodwa iindaba ezinxulumene noko, Inkampani yeKellogg yatsho iveki ukuba yayihamba isebenzisa iinkozo ezifafazwe ngeglyphosate kungekudala ngaphambi kokuvuna njengezithako kubathengi bayo kunye nokutya okuziinkozo. Isenzo sokusebenzisa i-glyphosate njenge-desiccant yayithengiswa yi-Monsanto iminyaka njengesiqhelo esinokunceda amafama ukuba azomise izityalo zawo ngaphambi kokuvuna, kodwa ukuvavanywa kwemveliso yokutya kubonise ukuba isenzo eso sishiya intsalela yombulali wokhula kukutya okugqityiweyo njenge-oatmeal.
AbakwaKellogg bathe "sisebenzisana nabanikezeli ngeenkonzo ukuphelisa ukusebenzisa i-glyphosate njenge-arhente yokomisa ngaphambi kokuvuna kwingqolowa yethu kunye ne-oat kwiimarike zethu ezinkulu, kubandakanya ne-US, ukuphela kuka-2025."
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, Bayer AG, EPA, ukutya, glyphosate, IMonsanto, Yisonge yonke, inzululwazi, St. Louis, trial
Uvavanyo lwaseSt.Louis Roundup lumisiwe njengoko indawo enkulu yokuhlala ibonakala kufutshane
ezaposwa ngomhla January 24, 2020 by UCarey Gillam
Uhlaziyo-Ingxelo evela eBayer: “Amaqela afikelele kwisivumelwano sokuqhubeka netyala likaWade kwiNkundla yeSekethe yaseMissouri yaseSt. Ukuqhubeka kwenzelwe ukubonelela ngamagumbi okuqhubeka kwenkqubo yolamlo ngokuthembekileyo phantsi kolawulo lukaKen Feinberg, kwaye kuthintelwe iziphazamiso ezinokuvela kwizilingo. Ngelixa iBayer ibandakanyeka ngendlela eyakhayo kwinkqubo yolamlo, akukho sivumelwano sibanzi ngeli xesha. Akukho siqinisekiso okanye ithayimthebhile yesisombululo esibanzi. ”
Ukuvulwa okulindelwe kakhulu kwento eyayiza kuba luvavanyo lwesine lomhlaza we-Roundup kwahlehliswa ngokungenammiselo ngolwe-Sihlanu phakathi kokuthethathethana ngokusombulula phakathi komnini weMonsanto uBayer AG kunye namagqwetha amele amawaka abantu ababanga ukuba umhlaza wabo ubangelwe kukuvezwa yimichiza yokubulala ukhula egazini iMonsanto's glyphosate-based.
Ijaji yeNkundla yeSekethe iSt. Louis City, u-Elizabeth Hogan wakhupha umyalelo othi kuphela “isizathu siqhubekile.” Umyalelo uza emva kwamagqwetha akhokelayo avela kumafemu abamangali e-Weitz & Luxenberg eNew York kunye neMiller Firm yaseVirginia ashiye inkundla yaseHogan engalindelwanga kungekudala ngaphambi kokuba kuvulwe iingxelo bekufanele ziqale ngentsasa yangoLwesihlanu. Imithombo esondeleyo kumaqela ezomthetho ekuqaleni ithi iingxelo zokuvula zityhalelwe kude kube semva kwemini ukuvumela ixesha lokuba babone ukuba amagqwetha abameli kunye namagqwetha aseBayer angasigqiba isigqibo esiza kulungisa amatyala amashumi amawaka. Kodwa ngenjikalanga inkqubo yayiyekisiwe kwaye bekucingelwa ngokubanzi ukuba isivumelwano sifezekisiwe.
Amanani ezigidi zeedola ezi-8 zeedola- $ 10 yezigidigidi atyibilikisiwe iiveki ngemithombo yesimangalo njengendawo yokuhlawula amatyala ngobuninzi bamatyala athe abamba iBayer okoko ithenge iMonsanto ngoJuni ka-2018 nge-63 yezigidigidi zeedola. Amaxabiso ezabelo zenkampani axinezeleke kabukhali yilahleko ephindaphindiweyo yamatyala kunye namabhaso amakhulu ejaji ngokuchasene nenkampani kwizilingo ezintathu ezigcinwe ukuza kuthi ga ngoku.
Olunye uvavanyo oluninzi lwaluza kubanjwa kwiiveki neenyanga ezimbalwa ezizayo, becinezela iBayer ukuba ixazulule amatyala kwangexesha ukuze kuqinisekiswe abatyali mali kwintlanganiso yabo yabanini zabelo ngo-Epreli.
Amagosa aseBayer aqinisekisile ukuba ngaphezulu kwe-42,000 yabamangali bafaka isimangalo ngokuchasene neMonsanto. Kodwa imithombo yesimangalo ithi ngoku bangaphezulu kwama-100,000 XNUMX abamangali abaklelweyo kunye namabango, nangona inani elipheleleyo lamabango afakiweyo lingacacanga.
Ifemi yeWeitz kunye nefemi yaseMiller xa zidityanisiwe zimela amabango amalunga nama-20,000 XNUMX abamangali, ngokutsho kwemithombo ekufutshane neefemu. UMike Miller, okhokela inkampani kaMiller, ligqwetha elikhokelayo kwityala laseSt.
UMiller ubambe isikhundla esiphezulu kwiingxoxo zokuhlala no-Bayer njengoko amanye amagqwetha abaphambili abatyikityiweyo sele etyikitye isivumelwano kunye nesiyobisi esikhulu saseJamani. IBayer kufuneka ikwazi ukufezekisa isisombululo ngesininzi samabango angekahlawulwa ukuze incede abatyali zimali abangenelisekanga.
Umlamli uKen Feinberg uthe kwiveki ephelileyo akucaci ukuba kungabakho isisombululo sehlabathi ngaphandle kokuphumelela uMiller. UMiller wayefuna "into acinga ukuba yimbuyekezo efanelekileyo," utshilo uFeinberg. UMgwebi weSithili sase-US uVince Chhabria wonyula uFeinberg ukuba asebenze njengomlamli phakathi kweBayer kunye negqwetha labamangali ngoMeyi ophelileyo.
Ijaji yetyala laseSt.
Amagqwetha kaMonsanto enze i-bid kwangoko ngolwesiHlanu ukuvimba ukusasazwa kwetyala ngoonomathotholo basekuhlaleni nakwizikhululo zikanomathotholo kodwa ijaji Hogan yagweba ngokuchasene nenkampani. Ityala langoLwesihlanu beliya kuba lelokuqala ukwenzeka kwindawo yaseSt. Louis, apho iMonsanto yayinekomkhulu layo ngaphezulu kweminyaka eyi-100.
Izilingo ezintathu zokuqala zahamba kakubi kuMonsanto kunye nomnini wayo waseJamani uBayer AG njengamajaji acaphuka inikwe ngaphezulu kwebhiliyoni yeedola kumonakalo kubamangali abane. Iijaji zetyala ziye zathoba amabhaso amajaji ukuya kuthi ga kwi-190 yezigidi zeedola, kwaye bonke baphantsi kwesibheno.
Izilingo ziye zajika ukubonwa ngabantu Ingxelo yangaphakathi yeMonsanto Oko kwabonisa indlela iMonsanto eyenze ngayo amaphepha enzululwazi evakalisa ukhuseleko lweeherbicides zayo ezibonakala ngathi zenziwe kuphela ngoososayensi abazimeleyo; basebenzise abantu besithathu ukuzama ukujongela phantsi izazinzulu ezixela ukwenzakaliswa kwe-glyphosate herbicides; kwaye sasebenzisana namagosa e-Arhente yoKhuselo lokusiNgqongileyo ukukhusela imeko kaMonsanto yokuba iimveliso zayo azibanga ngumhlaza.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker umhlaza, EPA, ukutya, glyphosate, inambuzane, Yisonge yonke, inzululwazi, St. Louis, trial